Dalalka Islaamka oo arrimaha Somalia ku lafa-guraya Shir ay berrito yeelanayaan | Shabakada Alshahid
Added by Webmaster on November 14, 2012.
Saved under Islaamka, Muuji, Warar, Warbixin
Jabuuti (Alshahid)- Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Islaamka ayaa maalinta berrito Shir ku yeelanaya wadanka Jabuuti, iyadoo Shirkaasina looga hadli doono arrimo ay ku jirto Xaaladda Somalia.
Wasiiradda arrimaha dibadda ee Somalia Marwo. Fowziya Yuusuf Xaaji ayaa Somalia ku matalaysa Shirrkan,waxayna maanta ka ambabaxday dalka si ay usii tagto halka Shirku uu ka dhici doono.
Bayaan Saxaafadeed oo kasoo baxay Xoghaynta guud ee Ururka Iskaashiga Islaamka ee xaruntiisu ay tahay magaalada Jeddah ayaa lagu sheegay in laba qodob oo ku kala saabsan arrimaha Siyaasadda iyo Bani’aadaminimada ee Somalia lagusoo bandhigi doono Shirka si looga doodo.
Bayaankan oo maanta soo baxay ayaa lagu xusay in Somalia ay qayb wayn ka noqonayso arrimaha ku jira qorsha-howleedka Shirweynahan, sababtuna waxay tahay iyadoo Shirkani uu ka dhici doono dalka Jabuuti oo daris lah Wadanka ay Mushkiladaha badani ka jiraan ee Somalia.
Sida ay Warbaahinta Caalamiga ah qaarkeed qortay, Shirkan ayaa fursad wayn siin doona ka hadalka Xaaladaha Somalia, gaar ahaanna xilligan oo isbedelo Siyaasadeed iyo kuwo Bani’aadaminimo oo aad u wanaagsan ay kasoo bidhaamayaan gudaha Somalia.
Waxaa xooga lagu saari doonaa Shirweynahan inay muhiim tahay taageero Caalami ah oo loo helo Somalia, taas oo ka bilaabanaysa dalalka Islaamka ee Shirkani uu u furmayo.
Ururka Iskaashiga Islaamku wuxuu go’aansanayaa ku dhawaaqista olole lagu taageerayo hogaanka cusub ee Siyaasadda Somalia oo uu horkacayo madaxweyne Xassan Sheikh Maxamuud. Arrintanina waxay ka dhalatay booqasho uu Bishii tagtay Muqdisho ku tagay Xoghayaha guud ee Ururka Islaamka Mr. Akmalu-Diin Ixsaan Oglo.
Arrimaha Bani’aadaminimada ee ka jira Somalia ayaa iyagana Shirweynaha Jabuuti ka furmaya si wayn loogusoo hadal qaadi doonaa. Waxaana la is tusayaa xaaladihii Abaaraha ee dalka horay uga jiray oo iminka lagasoo kabsaday.
Ka qayb galayaasha Shirka ayaa sida la qorsheynayo waxay ka hadli doonaan inay muhiim tahay taageero horumarineed oo Somalia loo helo iyo in la abuuro Mashaariic ku qotoma horumarinta dhinacyada Caafimaadka, Waxbarashada iyo gacan siinta Haweenka iyo Caruurta.
Sidoo kale Shirka waxaa looga hadli doonaa in fursado Shaqo loo abuuro dhalinyarada Soomaaliyeed.
Ururka Islaamka wuxuu horay ugu guuleystay qodista ku dhawaad 670 Ceel-Biyood ah oo fulintoodu ay ku kacday Lacag dhan 80 million oo Dollar. Mashaariicdanina waxaa looga gol lahaa in Biyo ay helaan dadka gudaha Somalia ku barakacay ee ay saamaysay Abaartihii kal hore halkaas ku dhufatay.
Sidoo kale waxaa jiray barnaamijyo Waxbarasho iyo kuwo Caafimaad oo Ururkani uu gacan ka geeystay lagana hirgaliyay qaybo badan oo Somalia ka mid ah.